प्रचण्डले माओवादीलाई एमालेकरण गरेर राष्ट्रियतालाई पिक्का बनाएः किराती
प्रकासित मिति : ९ भाद्र २०७५, शनिबार प्रकासित समय : २२:५८
काठमाडौं भदाै ९। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्ले शनिबार संवाद डबलीमा अन्तर्राष्ट्रिय विभागले ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नेपालको दृष्टिकोण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष किरातीले जनयुद्धले उचाइमा पुर्याएको नेपाली राष्ट्रियता एमालेसँगको एकतापछि पुनः फिक्का भएको बताए ।
अध्यक्ष गोपाल किरातीले पछिल्ला दिनहरुमा देशको कुटनीतिक मामला कमजोर भएको बताएका छन्। उनले चीनप्रतिको शुद्ध धारणा लिपुलेक प्रकरणपछि शंकाको घेरामा परेको बताए।
कार्यक्रममा बोल्दै सिवाकोटीले वर्तमान सरकार अघिल्ला सरकारभन्दा आन्तरिक र बाह्य सम्बन्धमा निकै कमजोर हुँदै गएको दाबी गरे । चीन र भारतबाट ७१ प्रतिशत सहयोग भएको र नेपालको १६१ ओटा मुलुकसँग कुटनीतिक सम्बन्ध भएको र जुन २९ प्रतिशतको लागि मात्रै यति धैरै देशसँग गर्नु अर्थिक बोजका हिसाबले फाइदा जनक नभएको बताए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भरत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध भएको भन्ने भनाई लगत भएको बताउँदै डा. सिवाकोटीले भने, “चिनीयाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणमा ल्याउने चार वर्षदेखिको कसरत के भयो ?
लिपुलेकको के भयो ? भारतीय छत्रछाँयामा नेपाली सेनालाई पुनामा तालिम किन ? यस्ता प्रश्नले नेपालको चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो छ प्रष्ट भएको छ ।” उनले भारतीयहरुले कोशस् व्यारेज सुरक्षार्थ भन्दै सेना नेपालमै राख्न अनुमतिपत्र आएको र कतै यो सरकारले भोलि गएर त्यो अनुमति पनि दिन सक्ने गम्भीर आशंका पनि व्यक्त गरे ।
राजनीतिक विश्लेशक डा.केवी रोकायाले नेपालको वर्तमान शासकहरु प्ूराना भन्दा पनि गएगज्रेका भएको र उनिहरुसँग देश र जनताको पक्षमा काम गर्ने भन्दा विदेशीलाई खुशी पारेर अर्थोपार्जन गर्ने दाउतिर अभिमुख भएको आरोप लगाए । रोकायाले नेपालमा आएको धर्म निरपेक्षता पनि विदेशीको डिजाइनमा भएको ठोकुवा समेत गरे ।
वर्तमान सरकारले कर्मचारीको तलब तथा आफ्नो नेता तथा कार्यकर्ता पाल्न निम्ति अनावश्यक जनताको ढाडमा करको बोझलगायतका जनविरोधी कामले जनता आक्रोशित भएको बताउँदै डा. रोकायाले भने, “यस्तो जनविरोधी सरकार ढाल्न अब देशमा ठूलो आन्दोलन हुन्छ, त्यसको नेतृत्व म र सुरेन्द्र केसी जस्ताले गर्ने छौं, किन कि राजनीतिक दलप्रति जनताको विश्वास उडिसक्यो ।
कार्यक्रममा प्रा.डा.सुरेन्द्र केसीले २१ औं शताब्दिको प्रराष्ट्रनीति परनिर्भर नभएर अन्तर निर्भर हुनपर्ने बताए । नेपालको विदेश नीति समुन्द्रीय, आर्थिक अन्तरनिर्भर मुलक पञ्चशीलको धारमा हुनुपर्ने आवश्यकता भएपनि विदेशी रिजाउने र व्यक्तिगत फाइदा लिने किसिमले नीति बनाइएको बताउँदै केसीले भने, “मुखमा समाजवाद भन्ने विदेशीलाई फाइदा हुने, देशलाई टाट पल्टाउने नीति छ यी शासकको ।
बुढाथोकीले जनताको ठूलो बलिदानीबाट अहिलेको परिवर्तन आएको तर सरकार त्यसलाई भुलेको बताउँदै भने, “हामीले ठूलो बलिदानी गरेर अहिलेको परिवर्तन आएको हो । फेरिपनि हामीलाई कम अक्दै हेप्ने हो भने विप्लव र वैद्य कमरेडसँग एकता गरेर सरकारलाई पाठ सिकाउन तयार छौं ।